Cajiib ah Soo-jeediya Hagaha Google Analytics ee Bilowga
Inay noqoto mid ka mid ah qalabka ugu sarreeya ee gacan ka geysanaya sidii loo qiyaasi lahaa horumarka ganacsiga, saamaynta Google Analytics on Search Engine Nidaaminta aan la burin karin. Google Analytics waa mid ka mid ah qalabka ugu wanaagsan ee kor u qaada waxqabadka boggaaga internetka, tirada dadka soo booqda ee ku yaal boggaaga, iyo heerarka xayeysiinta goobtaada.
Xaqiijinta taraafikada saxda ah ee aad ku leedahay Ololaha SEO iyo shaandhaynta kabaha iyo gaadiidka gudaha laguma faahfaahin karo si fiican. Sida bilowga, fahamka aasaaska SEO iyo sida loo faafin karo taraafikada aan loo baahnayn in laga dhejiyo warbixinta Google Analytics waa muhiim.
Waa kuwan tilmaamaha sahlan ee Igor Gamanenko, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Semt , si uu kaaga caawiyo fahamka Google Analytics guud ahaan.
Google Analytics Shuruudaha
Marka ay timaaddo Google Analytics, baahida loo qabo fahamka asaasiga ah ma aha mid si fiican loo adkeyn karo - buy high backlinks. Tusaale ahaan, waxaa lagugula talinayaa in aad raacdo hababka saxda ah marka aad ku rakibto koodhka Google Analytics ee ku yaal boggaaga si aad uga fogaato in aad lumiso macluumaad qiimo leh. Tababarkan, heerarka xayiraadda, booqashooyinka, iyo booqdayaasha gaarka ah ayaa lagu faahfaahin doonaa inay ku caawiyaan bilawga inay fahmaan Google Analytics..
Google Analytics raadinta xeerka
Ku garaacista suuqqaaga bartilmaameedka micnaheedu waa wax badan marka ay timaado Raadinta Mashiinka Raadinta. Kantaroolka Google Analytics raadinta ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaya ka caawinta la-taliyayaasha suuq-geynta ama milkiilayaasha bogga inay cabbiraan ololehooda. Raadinta meesha booqdayaashaada gaarka ah ay ka yimaadeen waxay ka caawisaa ganacsiyada si ay u sii wanaajiyaan waayo-aragnimadooda internetka si kor loogu qaado ka qayb-qaadashada isticmaalka iyo in lagu wado bogga internetka ee saxda ah.
Si aad u hesho olole firfircoon, muddada dheer, tixgeli sidii aad u dejin lahayd hadafyadaada Google Analytics iyo si joogto ah ula socoshada. Olole wacyigalin ah oo SEO ah ayaa sidoo kale lagu xaqiijin karaa iyada oo la isticmaalayo isku-tagga madaxa ee boggaaga internetka oo laga reebo khariidado ka imanaya warbixinnadaaga GA.
Raadinta munaasabadaha website-kan oo isticmaalaya GA
Google Analytics waa qalab u gaar ah oo caawiya la-taliyeyaasha suuq-geynta si ay ula socdaan dhacdooyinka ka dhacaya ololaha. Ogaanshaha meesha aad ka soo jeedo ee aan laga shakin karin marka ay timaado suuq-geynta internetka. Google Analytics waxa uu mulkiilayaasha boggaga ku dhejiyaa meel wanaagsan si ay u soo dhaweeyaan soo-booqdayaasha iyaga oo fahamaya dhadhanka iyo waxyaabaha ay jecel yihiin iyada oo la adeegsanayo heerarka soo noqoshada.
Qaadashada Google Analytics oo ku saabsan isku xidhka dibadda
Fahmitaanka in website kasta oo dhan uu ku xiran yahay xiriirka ka baxsan wuxuu kugu meeleyn doonaa boos wanaagsan oo aad ku dari karto Raadinta Mashiinka Mashiinka. Ku soo dirista waxyaabaha cusub iyo asalka dhabta ah ee boggaaga internetka waa mid aad muhiim u ah marka ay timaado suuq-geynta suuq-geynta . Ka faa'iideysi xidhiidhada ka baxsan si aad ugu dhufatid suuqa bartilmaameedkaaga oo aad gaadhi kartid gaadiidka dhabta ah mudada dheer. Si aad u bilowdo, waxaa lagugula talinayaa in aad fahamtid sida loo isticmaalo xiriirada gudbinta iyo sida loo soo bandhigo Google Analytics.
Weligaa ma tixgelisay qiyaasta sida shaqaalahaagu ula socdo booqdayaashaada iyo isticmaaleyaasha suurtogalka ah? Ku garaacista dhagaystayaashaaga bartilmaameedka ah waqtiga dhabta ah waxay keeneysaa go'aan iyo dadaal dheeraad ah. Qaar ka mid ah maqaallo ayaa la sii daayay iyagoo falanqeynaya sida xogta aan loo baahnayn looga saari karo macluumaadka Google Analytics. Ha u oggolaan in spamiyuhu kantaroolaan barta internetka. Heli mareegaha Google Analytics ee hagaha si aad u fahamto sida GA u shaqeyso.